DF Soomaaliya oo amar deg deg ah kasoo saartay Duulimaadyada Kismaayo.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes, wuxuu saacado ka hor shaaciyey in madaxdii hore ee dawladda Sookmaaliya Xassan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ay berri toos uga baxayaan madaarka magaalada Muqdisho, iyadoo ay dawladdu doonayso in ay is hor istaagto.
Wararkii u dambeeyey oo aan helnay hadda ayaa sheegaya in ay Xukuumadda Soomaaliya sheegtay in cid kasta aadi karto magaalada Kismaayo, waxaana la qaaday gabi ahaanba sharuudaha lagu soo rogay duulimaad diyaaradaha, sidda waxaan kasoo xiganay Sarkaal sare oo katirsan Hay’adda Duulista Hawada ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo Raysalwasaare Kheyre ayaa saacad ka hor yeeshay ayaa isku afgartay in aan waxba laga qaban karin xaaladdaha Jubbaland, sidaas awgeedna ay tahay in lasii daayo.
Ka hor kulankan, Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa gaarsiisay Madaxweyne Farmaajo dhambaal sharci ah oo ay uga digayso ficilada ku wajahan arrimaha xaqqa ay u leeyihiin Muwaadiniinta Soomaaliyeed, siddaas waxaa u sheegay PUNTLANDTIMES, Xubin sare oo katirsan Maxkamadda.
Duulimaadyada diyaaradaha ayaa awal lagu soo rogay in aysan qaadi karin siyaasiinta Soomaalida, balse xiligan oo ay Jubbaland adeegsanayso duulimaadyo gaar ah ayay fasaxday dawladda Faderaalka.
HALKAN KALA SOCO FAAHFAAHINTA